कविता : ठूला सपना
मनोरञ्जन , कला - साहित्य
विनय ज्याेती शनिवार, भदौ ७, २०७६, २१:५५:०० मा प्रकाशित
मलाई डर लाग्छ ठूला सपना देख्न
ठूला सपना देख्ने मान्छे हरुलाई त्यै सपनाले जलाउछ हो ?
परदेशमा धन कमाएर जस्ताको छानो हाल्ने तपाईंको ठूलो सपना
खायो हैन समुद्रको माछाले ?
पढेर ठूली मान्छे बन्ने ठूलो सपना बोकेर
एक घण्टा टाढाको स्कुल धाउने ठुल्दिदीलाई
निमोठ्यो हैन ब्वाँसोले ? पारी खोल्सामा
देश परीवर्तन गर्ने ठूलो सपना लिएर जुटेका सत्र हजारको घरवार
खरानी भएन र ?
के गरेन र ठूलो सपनाले ?
छोरालाई ठूलो स्कुल पठाउने ठूलो सपना बोकेका श्याम काकाको घरवारी
स्कुलको फिसमै चिलिम भएन र ?
त्यसैले, बाबा !
मलाई ठूलाठूला सपना देख्न डर लाग्छ ।
सपनामा ठूला घर, ठूला डाँडा, ठूला मान्छे,
ठूला शहर, देश देंखें भने
भोलिपल्ट बिहानै मन्दिर जाने गर्या छु बाबा ।
त्यै मन्दिर जहाँ भित्तामा
माला लगाएर तपाईंले आमा भनेर चिनाएको मान्छेको फोटो झुन्डिएको छ ।
म हतास हुन्छु बाबा, जब ठूला ठूला लात्ती म माथी पर्छन ।
त्यसैले, बाबा ?
ठूला सपना हामिले देख्नु हुन्न
बस् ! मेरो त एउटा सानो सपना छ...
विनय ज्याेती सापकाेटाकाे ब्लगबाट
कविता : ठूला सपना हो बाबा, मलाई डर लाग्छ ठूला सपना देख्न ठूला सपना देख्ने मान्छे हरुलाई त्यै सपनाले जलाउछ हो ? परदेशमा धन कमाएर जस्ताको छानो हाल्ने तपाईंको ठूलो सपना खायो हैन समुद्रको माछाले ? पढेर ठूली मान्छे बन्ने ठूलो सपना बोकेर एक घण्टा टाढाको स्कुल धाउने ठुल्दिदीलाई निमोठ्यो हैन ब्वाँसोले ? पारी खोल्सामा शनिवार, भदौ ७, २०७६, २१:५५:००
‘हल्ट प्राइज’ – जलवायु परिवर्तनविरुद्धको आन्दोलन पछिल्लो समय दुई कुराले विश्व तातेको छ । पहिलो – क्लाइमेट चेन्ज । दोस्रो – ‘क्लाइमेट चेन्ज’विरुद्धको शसक्त आवाज । ‘ग्लोबल वार्मिङ’ नामले विश्वमा चर्चा पाएको जलवायू परिवर्तन सम्बन्धि धारणा पछि ‘क्लाइमेट चेन्ज’ नामाकरण गरिएको थियो जसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार विरोध गरिरहे । आइतवार, आश्विन १२, २०७६, १४:१३:००
सय करोड क्लबमा अजयको 'तान्हाजी'
नेहा-आदित्य विवाह गर्दै
प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेकाे भन्दै गायिका आस्था राउतले फेसबुकमा पोखिन् आक्रोश